Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 80
Wiil Muslim ah oo weerar ka geystay dalka Maraykanka.
Todobaadkan aynu ku jirno billowgiisa ayaa wiil dhalinyaro Muslim ah waxa uu weerar ku qaaday Muwaadiniin Maraykan ah isagoo adeegsanaya Mindi. Wiilka weerarka fuliyay oo Maraykan Muslim ah ayaa da’diisa waxaa lagu sheegay 20 sano, waxaana uu muday Nin iyo Haweeney iyadoo mid kamid ah dhaawacyadaas uu yahay mid halis ah, islamarkaana markiiba loola cararay Cisbitaallada. Wiilka ayaa markii uu ...	Read More »
Ruushka oo wali wada xasuuqa ka dhanka ah Reer Suuriya.
Dowladda Ruushka oo dagaal furan kaga jirta dalka Suuriya ayaa wada gumaad bahalnimo ah oo aan loo meel dayin kaas oo ay kula kacayso Shacabka muslimka ah ee dalkaas, waxaana maalin kasta Reer Shaam sagootiyaan dad Shuhado ah. Maalintii shalay oo Isniin ahayd waxaa diyaaradaha Ruushku duqeymo ka geysteen xaafadaha magaalada Xalab iyo deegaanno dhaca baadiyaha Dimishiq, waxaana ku shahiiday ...	Read More »
Sida ay baahiyeen Ilo lagu kalsoonaan karo oo ka ag dhow Mujaahidiinta Al-Qaacida waxaa xabsiga laga sii daayay Gabdho uu dhalay Sheekh Ayman Adh-dhawaahiri kuwaas oo u xirnaa dowladda Paakistaan ee bah wadaagta la ah dowladda Maraykanka. Gabdhaha xirnaa oo ahaa saddex ayaa labo kamid ah oo lagu magacaabo Umeyma iyo Faadima waxaa dhalay Sheekh Ayman, halka gabadha sadexaad uu ...	Read More »
Dhagayso Warbixin: Taariikh Nololeedkii Ashs-shahiid Abuu Haajar Al-Xadarmi.
Mu’assasada Al-Malaaxim garabka warbaahineed ee Mujaahidiinta Alqaacidada Jaziiradda Carabta ayaa baahisay Isdaar decumentry ah oo ay uga warbixineyso Taariikhda Abuu Haajar Al-Xadarmi. Hadaba waxaan idin soo gudbineynaa warbixin aan ka diyaarinay Juzka koowaad ee Filimka. Halkan ka dhagayso Warbixin Taariikhda Abuu Haajir	Read More »
Warbixin: Hogaamiye sare oo katirsan Alqaacida oo baaq muhiim ah jeediyay.
Mu’assasada As-saxaab garabka warbaahineed mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa baahisay kalimad maqal ah oo uu jeedinayo Xamze bin Usaama bin Laadin oo ah hogaamiye katirsan Mujaahidiinta Alqaacida. Kalimadda oo ah mid muhiim ah waxa uu Xamze kula hadlay Muslimiinta Xarameynka. Halkan ka dhagayso Warbixin Kalimadda Xamze bin Usaama Read More »
Wararka ka imaanaya dalka Turkiga ayaa ku waramaya in waaberigii maanta oo khamiis ah weerar xoogan oo loo adeegsaday Gaari miineysan uu ka dhacay mid kamid ah magaalooyinka ay ku badanyihiin dadka Turkida ah oo ku taalla gudaha dalkaas. Qaraxa oo ahaa mid xoogan islamarkaana loo adeegsaday Gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa lala eegtay Xarun Booliis oo ku ...	Read More »
Warka Subaxnimo ee Idaacadda Islaamiga ah waxaa lagu soo qaatay dhacdooyinka Caalamka iyo kuwa dalka. Si aad u hesho hadba waxa cusub la soco wararka iyo Barnaamijyada Idaacadda Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War Subax 18 08 2016.lite	Read More »
Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Dhaalibaan ayaa la wareegay gebi ahaanba degmada Dahna Guuri ee gobolka Baqlaan oo dhaca wuqooyiga dalka Afqaanistaan kadib dagaallo in muda ah socday. Howlgalkan lagula wareegay degmadan istiraatiijiga ah ayaa qayb ah howlgalka Cumariyah ee Gugii aynu soo dhaafnay ku dhawaaqday Imaarada Islaamiga ah, waxaana la wareegista degmadan u dheeraa Mujaahidiinta in Qanaa’im aad u ...	Read More »
Magaalada Banqaazi oo dagaallo xoogan marti gelisay.
Maalintii shalay waxaa dagaallo xoogan ay ka dhaceen magaalada Banqaazi ee dalka Liibiya kuwaas oo u dhexeeya ciidamada Mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka Khaliifa Xaftar kuwaas oo doonaya in maggaalada ay ka saaraan Mujaahidiinta balse awoodi la’. Dagaalka oo ahaa mid ay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha dowladda Faransiiska iyo kuwa Xaftar ayaa waxaa lagu sooo waramayaa in ciidamada Xaftar ay ku guul ...	Read More »
Dowladda Maraykanka oo Maxaabiis kasii daysay Xabsiga Guwantanmo Bay.
Iyadoo qayb ka ah qorshaha Uu Obama ku doonayo inta uusan xilka ka degin inuu kusoo xiro xabsiga sumcadda xun ee Guwantanamo Bay ayaa maamulka Xabsigaas wuxuu kasii daayay 15 Maxbuus oo kamid ah kuwa xaq darada loogu heystay halkaas wax kabadan 10 sano. Maxaabiista lasii daayay oo tiradoodu gaareyso 15 waxaa 12 kamid ah kasoo jeedaan dalka Yaman ee ...	Read More »